China Steel swa mqengqeleki mveliso kunye factory | Joyroll
Steel swa mqengqeleki
Isinyithi sokuhambisa i-roller zizinto zeenkqubo zokuhambisa ibhanti njengoko zibonelela ngenkxaso yomthwalo kwicala lokuhamba nakwicala lokubuyela.
Isondo rollerziyinxalenye yeenkqubo zokuhambisa ibhanti njengoko zibonelela ngenkxaso yomthwalo kwicala lokuhamba nakwicala lokubuyela. I-roller yokuhambisa imiselwe emgangathweni kwaye iyilelwe ngokwemigangatho ye-ISO, DIN kunye ne-EN. Iiroller ezenziwe ngokwezifiso ziyafumaneka xa ziceliwe. IJOYROLL iyakwazi ukuhambisa uluhlu lwezinto ezizodwa zokuyila: izijikelezi-manzi ezinobungqina bamanzi, izileyi zeemeko zemozulu ezigqithisileyo, isondo lokuhambisa ukulayishwa okugqithisileyo, izileyi ezihamba ngesantya esiphezulu, izandi ezinengxolo ephantsi, izileyi zeemeko zemichiza kunye neevili ezinamathelayo.
Ukucaciswa:Ububanzi beRoller: 89, 102, 108, 114, 127, 133, 140, 152, 159, 165, 178, 194, 219mmUbude beRoller: 100-2400mm.Shaft Diameter: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mm Uhlobo: 6204, 6205, 6305, 6206, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310Surface Treatment: Electrostatic Powder Coating, Galvanization.Standard: DIN, CEMA, JIS, AS, SANS-SABS, GOST, AFNOR njl.
IINKCUKACHA ZOKUQALA KWI-ROLLERS:1.Umbhobho: Ukuchaneka okuphezulu kumbhobho we-ERW okhethekileyo kunye nokujikeleza okuncinci. Isixhobo se-Q235 esilingana neYurophu S235JR2.Shaft: Ukuchaneka okuphezulu kwebar ejikelezayo ebandayo, Izinto ezingama-45 # ezilinganayo ne-DIN C45.3. Ukutywina kabini,Umgangatho weBakala P5Z3Indlu ye-4: Ukuzala kwendlu Ukuthambisa igrisi ehlala ihleli, imeko yokusebenza -20 ° c ukuya kwi-120 ° c8.
IIMBONAKALO1.Ukugqitywa kwesalathi esipheleleyo (TIR), ukumelana nokujikeleza okuphantsi; 2. Ikepusi yokuphelisa ityhubhu welds ekhuselweyo kwirabha enxibe ibhanti; 3. Amatywina e-labyrinth asebenza kakhulu akhuselwe eluthulini nasemanzini ukuya ekuthwaleni; 4. Eyilwe yaveliswa ubomi obude, obungenangxaki; 5. Ulondolozo-free, ezikumgangatho ophezulu etywiniweyo ibhola ethwele.
ISICELOImigodiUkuguba kwensimbiUkutyala isamenteUkutyala amandlaChemical Plant
Okulandelayo: Self-Aligning Buyisa Idler
Iinqwelo zokuhambisa zeSinyithi